Ozi niile sitere na Netflix na HBO na Machị 2020 | Akụkọ akụrụngwa
Ozi niile sitere na Netflix na HBO na Machị 2020
Miguel Hernandez | | Ihe nkiri na usoro, Home
Anyị na-alaghachi otu ngwụcha izu na ozi niile ndị isi na-eweta ọdịnaya na-enye anyị. N’ọnwa a, a na-ebu akụkọ banyere Netflix na HBO, mgbe ụfọdụ ọ na-esiri ya ike ịgbaso usoro nke izizi, mana echegbula onwe gị, n’ihi na anyị na-efe efe ka ị ghara ileghara ihe ọ bụla nke ihe ndị a anya. gị, ọkachasị n’ọnwa Machị ebe Dinsey + ga-esi rida na Europe site n’ọnụ ụzọ. Nọnyere anyị ma chọpụta ihe niile bụ mmalite na akụkọ nke Netflix na HBO n'oge ọnwa Machị 2020.
1 Netflix premieres
1.1 Usoro malitere na March 2020
1.2 Ihe nkiri na-ahapụ na March 2020
2 HBO gosipụtara
2.1 Usoro malitere na March 2020
2.2 Ihe nkiri na-ahapụ na March 2020
Usoro malitere na March 2020
Dị ka ọ dị na mbụ, anyị na-amalite site na ndị kachasị ewu ewu na ndị na-enye ọrụ, Netflix na-aga n'ihu na-arụ ọrụ na nrụpụta nke aka ya nke ghọgoro isi iyi nke ọdịnaya maka ndị ọrụ niile. N'agbanyeghị eziokwu na n'ọnwa a, katalọgụ ahụ ga-aga n'ihu na-agbasawanye, ọkachasị na ngalaba ihe nkiri, anyị enweghị ike ileghara ọtụtụ usoro anyị ga-ahụ n'ime ọnwa Machị na Netflix na nke ahụ dị ọhụrụ anya.
Anyị na-amalite na nke atọ oge nke J.Randall, conglomerate nke ụmụaka posh nwere ntiwapụ (pun zubere) n'ụlọ akwụkwọ nkeonwe na Madrid. Ileba anya na isi nsogbu ndi ntorobia na-enwe taa na ileba anya n’otu ha si eme nmekorita ha. Oge abụọ nke mbụ aghọwo ihe ịga nke ọma zuru ụwa ọnụ, na-atụgharị Miguel Bernardeau, María Pedraza na Ester Expósito n'elu kapeeti uhie uhie nke mba ahụ. Oge nke atọ a na-ekwe nkwa otu ike, otu aghụghọ na otu obi ike dị ka ndị gara aga. Anyị amabeghị ma ọ ga-abụ ọrụ a, anyị ga-echere Machị 13 maka nke mbu.
N'aka nke ọzọ ọ na-abịakwa nke abụọ oge nke Alaeze, a aru ma ụtọ mix n'etiti kara nkà, zombies na nza nke omimi. A nabatakwara oge nke mbụ na mba ụwa, yabụ na oge nke abụọ a nwere ihe niile iji mezue ọzọ na nnukwu ihu ụlọ anyị. O doro anya na ihe na-adọrọ mmasị na-akpali akpali nke na-amalitekwa n'otu ụbọchị Machị 13. Netflix adịghị ka ụjọ na-atụ ya ụjọ ma ọ dịkarịa ala site na nkwenkwe ụgha na anyị ga-ahụ ọtụtụ ọdịnaya mbụ na ụbọchị ndị ahụ e kwuru.
Ekwensu nwere ike ibe akwa - March 1
Card Hunter Sakura - S3 Machị 1
JoJo's Bizarre Adventure - S2 na Machị 1
Ihe akụkọ ihe mere eme nke Arsland - March 1
Castlevania - S3 na Machị 5
Ndị uwe ojii Paradaịs II - March 6
Onye nchebe - S3 na Machị 6
Vikings - S6 na Machị 10
Ọnwụ nke Valhalla - March 10
Gburugburu Brasil - March 11
Ego ruru unyi - S2 na Machị 11
Elite - S3 na Machị 13
Womenmụ nwanyị nke Abalị - March 13
Njem Ọbara - March 13
Alaeze - S2 na Machị 13
Obi dị gị mma - Machị 19
Akwụkwọ ozi nke Eze - Machị 20
Vampriso - Machị 20
Gbalịa m - Machị 20
Greenlọ akwụkwọ Greenhouse - S4 na Machị 20
Brooklyn Nine Nine-S6 na Machị 22
7Seeds - T2 na Machị 26
Black Lightning - S3 na Machị 26
Na-ekweghị ekwe - Machị 26
Ozark - S3 na Machị 27
Anyị ga-echefu na anyị nwere ihe na-akpali mmasị premiere na usoro nke Ekwensu nwere ike ibe akwa na oge nke atọ nke ụdị nke Castlevania na Netflix na-ebu.
Ihe nkiri na-ahapụ na March 2020
Na ọkwa nke ihe nkiri, Netflix gosipụtara eziokwu ahụ bụ na ihe nkiri ndị ọzọ si na Studio Ghibli enwetara na-abata. Odi n'uju zuru ezu site n'otu ubochi buru uzo abuo di ka Princess Mononoke, na onye a maara nke ọma Mmụọ Mmụọ. O doro anya na nke a bụ ezigbo ohere iji hụ ha ọzọ.
Nlebara anya pụrụ iche na ihe nkiri Spanish Oghere nke ahụ rutere n’elu ikpo okwu obere oge ka ahapụchara ya n’ụlọ ihe nkiri.
Anyị malitere na HBO na oge nke atọ nke Westworld a na-atụ anya ya. Kpachara anya n'ihi na o yiri ka ụdị "ndị ntụgharị" a tụrụ ime iji mee ụmụ mmadụ obi ụtọ n'otu ogige ntụrụndụ pụrụ iche jisiri ike kụọ n'okporo ámá, ha ga-ewetara anyị ihe ịtụnanya ụfọdụ. Ọ bụrụ na ị hụbeghị Westworld, ọ bụ oge dị mma ịmalite ya, dị site na-esote Machị 16nd.
Axios - S3 na Machị 2
Gọziri agọzi ndidi - March 3
Argha ụgha - S2 na Machị 3
Baron Noir - S3 na Machị 4
Ọbụna na-adịghị mma - March 5
Ihe Ka Mma - S4 na Machị 6
Atụmatụ ahụ megide America - March 17
Anyị Amụrụ Anyị ọzọ - Machị 30
Banyere ihe nkiri, HBO na-ewelite ụkwụ ya ntakịrị, na-enye ọtụtụ ọdịnaya site na ihe nkiri eserese na mbụ, mana nke anaghị anọchite anya "ọganihu" ọ bụla n'ihe gbasara ikpo okwu. Anyị na-egosipụta ihe nkiri egwu Mụ mgbei na ọ bụ ezigbo ihe ịga nke ọma yana na enweghị obi abụọ ọ ga-enye gị oge siri ike.
Mgbe Earthwa gachara - March 1
Ndị mmụọ ozi Charlie: N'elu
Eziokwu na-afụ ụfụ
Ndị nne ọgbaghara
SWAT: Ndị Harrelson
Onye Ochichi - Machị 6
Ihe ntụgharị: Afọ Mbibi
Ehihie Boogie - Machị 13
Izu m na Marilyn - Machị 18
Batman Trilogy - Machị 20
Gran Torino - Machị 20
Ọrụ Mgbakwunye 3
Ọ bụrụ na ị hụbeghị ya, Gran Torino Ọ bụ otu n'ime ọrụ kachasị mma na Eastwood tozuru etozu ihe nkiri nke bu nri maka iche echiche ma dikwa nma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Ihe nkiri na usoro » Ozi niile sitere na Netflix na HBO na Machị 2020
Ahịa ụlọ ahịa Huawei eStore dị na onyinye
Analysis Energy usoro okwu elekere 3